I-TrovaWeb Club: Umphakathi Ohlanganyelayo Wezinkampani kanye Nezazi
Ukuthembeka kwekhasimende elidlula ekwabeni
Isiqalo Esizwayo e CIsihleli Se-Inthanethi esingatholakalanga ngokuthambekela okuqinile kwezobuchwepheshe, I-TrovaWeb inqume ukuqhubekisela phambili ukunweba umnikelo wayo wedijithali ngokwenza kusebenze a Ukwabelana Ngeqembu ezinikezelwe ku ochwepheshe ed izinkampani.
Un Club ngezici Social kusekelwe kwifilosofi ye Ukwabelana Ngomnotho: nansi ukufingqwa kwephrojekthi entsha eyethulwe yi I-TrovaWeb futhi unikezelwe Izinkampani e professionals amalungu e Ukujikeleza kwesihleli.
I-Club ethatha Ukwabelana ezingeni elilandelayo
Ukwabelana Komphakathi kuyinkulumo yokuwina yesikhathi: kuyindlela entsha yokukhulelwa i ibhizinisi okunika amathuba amaningi izinkampani wabo bonke osayizi Ngenxa ukusetshenziswa kwamapulatifomu e-inthanethi okwabelana ngawo amaphromoshini, okuqukethwe kanye ukucaphuna, ikuvumela ukuthi ufinyelele izinkulungwane zoxhumana nabo ngokushesha, ugcizelela isisekelo sakho somsebenzisi. ukugcinwa yi-password: bheka Ukwabelana ngebhizinisi iyithuluzi elifanele ukuthembeka la ikhasimende futhi uhehe oxhumana nabo abaningi abasha.
Ukwabelana NgeNkampani: ITrovaWeb Club inikezelwe ezinkampanini nakwabasebenza kuyo
I-TrovaWeb inqume ukwenza leli thuba elimangazayo litholakale kumakhasimende alo ngezawo Club. Ngaphezu kokonga ekuthengeni nokuba ngabaphikisi bokukhushulwa okukhethekile, labo abasebenzisa i- Club I-TrovaWeb futhi inethuba lokuhola ngokumane wabelane. I- Club Kunikezelwe izinto zangempela zentengiso okuyingxenye yoMjikelezo Wokuhlela, kepha kuyithuluzi elingazuzisa nabo bonke abathengi, izinkampani kanye Abathengisi abafuna ukuqonda amandla ayo.
I-TrovaWeb Club ihlanganisa amathuba okuhlanganyela nokwenzelela ukuxhumana nomphakathi
Ngokuzalwa kwe Iklabhu, la nokwabelana ngomphakathi ezinikezelwe ku Izinkampani amalungu ezinkonzo I-TrovaWeb, ithuba lokuxhumana ngesikhathi sangempela nezinye izinkampani nabaphakeli liqhubeka likhuliswa. Kepha ngaphezu kwakho konke, ivumela labo abayisebenzisayo fidelizare amakhasimende ayo ngenxa yamathuluzi ethu Club. Ngenxa yemvelo yayo Ukwabelanaeqinisweni, ungxhumana futhi wabelane ngokuqukethwe ngesikhathi sangempela nabo bonke oxhumana nabo. Ngokwethulwa kwe Ukwabelana Club ngayinye Izinkampani kanye nochwepheshe, I-TrovaWeb ikhombisa ukuhambisana nezikhathi futhi, ukuzilindela. Umkhakha we Ukwabelana nge-inthanethi empeleni iyindawo ethembisayo kakhulu enikeza imiphumela eminingi lapho isisetshenzisiwe.
Izithombe ezingenamkhawulo, amavidiyo, okunikezwayo nokuphromotha kubonga ekilasini lethu lokwabelana
Ngenxa yale nsizakalo eyengeziwe, Qalisa iTrovaWeb unikeza izinkampani amandla okuthumela amavidiyo, izithombe, ukukhushulwa e okuqukethwe ngendlela engenamkhawulo. Futhi, kunikeza ithuba lokwethula izinhlolovo, okwabiwayo okunikezwayo ngesikhathi sangempela, Ikhuphoni, i-albhamu, ukukhushulwa njalo njalo. Njengoba wonke amakhasimende ethu esazi, I-TrovaWeb kungukuthi i-portal ehlanganisiwe ye-multiplatform kwakheka kahle Iziza eziyi-12 ezinikezelwe ku izinkampani, ochwepheshe, izindawo zokuhlala e ibhizinisi kwesigaba ngasinye. Futhi lokhu Club iza ukwenza umnikelo wethu wedijithali ukhange ngokwengeziwe. Iphrojekthi yokuhlela ebanzi, I-TrovaWeb è Ukuqalisa okwenza iwebhu yentando yeningi ngokunikeza wonke umuntu amathuba afanayo ukubonakala. Futhi ukuvumela izinkampani encane, ephakathi nenkulu ye ukuthembeka amakhasimende abo ngokushesha nangendlela efanele.
Tags: iklabhu iTrovaweb izinkampani zokwabelana izinkampani zokwabelana Ukwabelana nge-inthanethi ukuqala okuhle